Baarlamaanka Sweden oo ansixiyay sharciga cusub ee qaxootiga, goorma ayuu dhaqan-galayaa? | Gaaloos.com
Home » somalida qurbaha » Baarlamaanka Sweden oo ansixiyay sharciga cusub ee qaxootiga, goorma ayuu dhaqan-galayaa?
Baarlamaanka Sweden ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay sharciga cusub ee qaxootiga kaasoo si weyn wax uga badalaya qaabkii ay Sweden ku qaabili jidhay qaxootiga. 240 xildhibaan ayaa ku codeysay Haa, 45 waa ka diiday, 30 waa ka aamustay iyo 34 ka maqnayd kala fadhiga. Sharciga cusub ayaa waxaa u codeeyay xildhibaanada xisbiyada Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD)
Title: Baarlamaanka Sweden oo ansixiyay sharciga cusub ee qaxootiga, goorma ayuu dhaqan-galayaa?